Ahoana ny fomba handaozana fifandraisana misy poizina ary hamaranana azy tsara: dingana 6 lehibe - Fifandraisana
Dingana 6 handaozana ny fifandraisana misy poizina ary hamaranana azy tsara
Ny fifandraisana misy poizina dia tsy voafetra fotsiny amin'ny sehatry ny tantaram-pitiavana. Azo atao ny manana fifandraisana poizina amin'ny namana, mpianakavy, ary indraindray ny olona izay ampifandraisinao amin'ny ampahany ihany.
Ny 'Toxic' dia ampiasaina ho teny mahasarika rehetra hamaritana ny fifandraisana maro tsy miasa sy / na mpanararaotra.
Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana misy poizina dia tsy mahasalama ary manimba amin'ny fomba sasany amin'ireo mpandray anjara.
Ny fanalavirana ny tenanao amin'ireo fifandraisana misy poizina ireo dia tena ilaina amin'ny famoronana fiainana salama sy feno. Tsy afaka manasitrana izay ratra entinao sy mitombo amin'ny maha-olona anao fotsiny ianao, raha tsy mivoaka amin'ireo fifandraisana misy poizina izay nandratra anao.
1. Mitadiava fanampiana avy amina matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina.
Mety ho sarotra ny miala amin'ny fifandraisana misy poizina, indrindra raha manararaotra izany.
Aoka hatao hoe hiezaka ny hampitsahatra ny fifandraisana misy poizina na fanararaotana ianao. Amin'izay dia tokony hiresaka amin'ny mpanolotsaina ara-pahasalamana voamarina ianao aloha mba hanampy amin'ny fandaminana ny fivoahanao.
Matetika ny herisetra ao an-tokantrano rehefa mitady handositra ny fifandraisana misy poizina sy manararaotra ny olona iray. Ho fiarovana anao, tsara kokoa ny mahazo fahitana matihanina alohan'ny hanaovanao zavatra.
Tsy ny fiarovana ihany no antony itadiavana fanampiana matihanina. Misy ny antony nahatafiditra anao tamina fiarahana poizina ary nanapa-kevitra ny hijanona ao aminy raha mbola nanao izany ianao. Ireo antony ireo dia matetika miorim-paka amin'ny zavatra maharary toy ny tantara mampivadi-po na ny tsy fahatokisan-tena.
Tsy olana ireo fa azon'ny olona apetaka fotsiny ny rantsan-tànany sy amboariny. Tena mila mamantatra ny antony nahatonga anao tao anatin'ny fifandraisana misy poizina ianao tamin'ny voalohany mba hahafahanao manamboatra izay antony rehetra.
Mety tsy zavatra manjavozavo koa izany. Diniho ny fifandraisana am-pitiavana. Mihaona amin'ny olona iray ianao, tratranao ilay izy, tsara ry zareo! Ary tsara be ry zareo mandritra ny fotoana lava!
Saingy mijanona tsikelikely ny fahalehibiazany. Manomboka mifidy sy mitsara ary manandrana mifehy anao izy ireo. Alohan'ny hahalalanao azy dia manandrana mitazona ny lohanao eo ambonin'ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana sy ny poizina ianao.
Mety nanapa-kevitra ianao ny hanome an'io olona io ny tombotsoan'ny fisalasalana amin'ny zavatra be dia be izay ataonao fialantsiny fotsiny ny amin'ny fomba itondrany anao. Tsy mahamenatra izany. Mety hitranga amin'ny olona rehetra izany.
Ny matihanina iray dia afaka manampy anao hamantatra ireo zavatra ireo ary koa raha mitarika anao hiala amin'ny fifandraisana misy poizina.
2. Araraoty ary lazao ny fahatsapanao momba ilay fihetsika misy poizina.
Ny firesahana fihetsika misy poizina no fomba tsara indrindra hampahafantarana fa manana olana amin'ny fihetsiky ny olona ianao.
Amin'ny fifandraisana salama dia tokony ho afaka hitondra ny ahiahyo ianao ary hanaja azy ireo amin'ny olon-kafa. Ny fomba fandraisan'ny olona iray ny fihetseham-ponao dia hilaza aminao bebe kokoa raha azo hamarinina ve ilay fifandraisana.
Raha mandà tsy handre anao izy ireo na hamaly amin'ny fahatezerana na fandrahonana, dia famantarana tsara izany fa tsy ho voavonjy ny fifandraisana.
Ianao koa dia te hitandrina mba hiovaova ny tsiny. Raha tokony hanaiky ny andraikitra sahan'izy ireo izy ireo dia hanandrana mametraka azy ireo aminao.
Etsy ankilany, mety ho afaka manandrana miaraka amin'ilay olona indray ianao raha manaiky fa misy ny olana, ary vonona ny hametraka ny asa izy ireo hanamboarana azy.
Azo inoana fa mila fanampiana avy any amin'ny mpanolotsaina izy ireo satria ny ankamaroan'ny olona dia tsy ho afaka manitsy an'io karazana fihetsika io samirery.
3. Tapaho ny fifandraisana amin'ilay olona.
Raha mieritreritra ianao fa manapa-kevitra fa ilaina ny mamarana ny fifandraisana misy poizina, ny dingana manaraka dia ny manapaka na mametra ny fifandraisana amin'ilay olona.
Arakaraka ny habetsaky ny serasera anananao no haharitra ny fotoana hahasitrananao ny fifandraisana ary handrosoana.
Tsy azo atao foana ny manapaka tanteraka ny fifandraisana. Mety manan-janaka ianao, mifandray amin'ny fianakavianao, na manana andraikitra iraisana mitaky anao hifandray amin'izy ireo.
Raha izany dia azonao atao ny mampiasa ny Fomba Gray Gray . Raha fintinina, tazomy ho matihanina, fohy ary hatramin'ny farany. Aza avela hisarika anao amin'ny fifanakalozan-kevitra na hampiala voly ny 'what ifs' avy amin'ilay olona hafa.
Raha firaisana ara-pitiavana izany dia aza milalao na manao firaisana amin'izy ireo. Tazomy ny elanelana misy eo aminao mba samy hanana fotoana mety ianao hanasitranana.
4. Omeo fotoana sy fahazoan-dàlana hanasitrana ny tenanao.
Aza mitsambikina mankany amin'ny fifandraisana hafa amin'ny fifandraisana misy poizina.
Ny olona sasany dia manana fahazaran-dratsy amin'ny fitsambikinana avy amin'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana satria matahotra ny ho irery na mahatsiaro ho tsy feno izy ireo rehefa tsy ao anatin'ny iray.
Io karazana fihetsika io dia mety ho antony mahatonga anao hiditra sy handefitra amin'ny fifandraisana misy poizina eo amin'ny toerana voalohany.
Aorian'ny fifaranan'ny fifandraisana dia mila fotoana ianao hamelana anao ho sitrana. Betsaka ny olona mahita ny tenany amin'ny fifandraisana misy poizina koa no mahatsapa fa tsy mifandray intsony amin'ny hoe iza izy ireo na inona no zava-dehibe amin'izy ireo. Makà fotoana kely hamerenana amin'ny laoniny ny tenanao amin'ny hoe iza ianao, inona no lanjainao ary inona no mitondra anao fahasambarana.
Fotoana tsara indrindra koa izao hakana fialamboly taloha na lafiny hafa amin'ny tenanao fa mety tsy raharahianao noho ny fifandraisana misy poizina.
5. Aza mijanona amin'ny fiarahana.
Ny fijanonana eo amin'ny fifandraisana dia manokatra varavarana ho an'ny famerenana indray. Arakaraka ny itiavanao azy io, no ahafahanao manome ny atidohanao hahatsiaro ny zavatra tsara rehetra momba ilay olona iray hafa ary tsy hijery ny ratsy.
zelina vega toa aj lee
Ny ati-dohantsika dia manana fahazaran-dratsy manao izany. Tianay ny hahatadidy ireo zavatra tsara izay nanakaiky anay tamin'ilay olona, ​​nefa miaraka amin'izay dia ahenainay ny vokany ratsy.
Aza avela hifantoka amin'ilay fifandraisana misy poizina, na nanao ahoana, na nanao ahoana izy ireo. Ny hany zava-dehibe ankehitriny dia ny nisafidiananao hanalavitra ny tenanao sy hanasitranana. Mifantoha amin'izany.
Raha mila izany ianao dia mankanisa any amin'ny namanao, fianakavianao, na mpanampy anao rehefa hitanao fa miova ny fahatapahan-kevitrao.
Azonao atao ihany koa ny miatrika ireo fahatsapana ireo amin'ny alàlan'ny diary na fanoratana. Betsaka no mahita fa manoratra taratasy ho an'ilay olona ary avy eo manimba azy ho fomba fitsaboana iray hampihetsi-po ny fihetsem-pony.
6. Soloy ny fifandraisana misy poizina amin'ny fifandraisana tsara.
Raha vantany vao nanam-potoana hitombo sy hanasitranana ny ratrao ianao, dia afaka mifantoka amin'ny famoahana ny zavatra niainanao tamina fifandraisana tsara kokoa.
Azonao atao ny mandray hetsika ara-tsosialy vitsivitsy na mahita fialamboly vaovao izay hanampy anao hihaona amin'ny olona tsara kokoa sy hampitombo ny faribolana.
Arakaraka ny mahavery ny fotoana laninao amin'ny fihenan'ny fihetseham-po sy ny ara-tsaina amin'ny fifandraisana misy poizina, ny fotoana anananao ho an'ny tenanao sy ny fifandraisana tsara.
Ahoana ny fomba hiresahana mahomby aorian'ny fifandraisana narcissistic
Ahoana no manapaka ny fifamatorana amin'ny fianakaviana misy poizina: Dingana 6 tokony horaisina
Ahoana ny fomba hahitana ireo ray aman-dreny misy poizina (+ dingana 6 hiatrehana azy ireo)
fanontaniana tsy ampoizina hahatonga anao hieritreritra
ny fomba fanoratana fanamarihana fitiavana
tsy manana namana akaiky intsony aho
mariky ny olona mangatsiaka fo
ahoana no hahafantaranao tsara fa misy tovovavy tia anao
tsy manana fahaizana na talenta aho